Ixesha elide, bendizama ukubonisana nabaqalayo nabaxhasi bamashishini amakhulu kuba bendisazi ukuba ndiza kuba nakho ukuhambisa inaliti yokuguqula kakhulu iinkampani ezinemithombo kunye nexesha lokufaka isabelo sentengiso. Kunyaka ophelileyo, okokuqala, ndaye ndagqiba kwelokuba ndisebenzise ubuchule obunye endibusebenzisele ezo nkampani zinemimandla, iinkampani ezincinci ...
Isiseko seqhinga kukushiya ifayile ye- Umgca wokuvelisa umxholo kwaye endaweni yoko, kuphuhliswa ilayibrari yomxholo. Ukugxila kwethu akukho kumaxesha okanye kumanqaku amanqaku esiwavelisela umthengi, kukuphanda izihloko abanomdla kuzo kwaye ezifanelekileyo kwishishini… kunye nokwakha igunya labo kunye nelokuzithemba kunye nokuzithemba. nabaxhamli beenkonzo. Iziko lokugxila lisusa inkampani kwaye, endaweni yoko, libeke umthengi okanye ithemba kwishishini embindini womxholo.
Kunoko, Isosi seAgent isebenza ngencwadana, ibhlog, kunye nepodcast ejolise kwimiceli mngeni kunye nezibonelelo zokuphumelela umthengisi zindlu. Baye baneengxoxo malunga nemicimbi yezomthetho, i-VA mboleko, ukufuduswa kweshishini, iirhafu zikarhulumente kunye nezomdibaniso, uqoqosho lwengingqi, isiteji sasekhaya, ukufakela indlu, njl. kukubonelela ngobungcali obuvela kwimithombo yeshishini eya kuthi incede amathemba abo kunye nabathengi bathengise ngokukuko ngakumbi kwaye bakhule ishishini labo.
Ngeli xesha, umbhali unokwenza uphando lokuqala kukhuphiswano, kwizixhobo, nakwimeko yabaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye abuye noqikelelo lokugqitywa kwenqaku kunye neendleko. Andikhathali ngobude bomxholo; Ndiyakhathala Ukuchaneka komxholo. Ukuba ndipapasha inqaku malunga nesihloko, ndifuna ukuphendula yonke imibuzo ehambelana nalo mxholo. Ndifuna ukubonelela ngezibalo kunye namanani. Ndifuna ukufaka imizobo, iitshathi, imifanekiso kunye nevidiyo. Ndifuna ukuba inqaku libe lelona nqaku libalaseleyo kwi-Intanethi.